Kooxda Real Madrid oo Manchester United ku wargelisay qiimaha ay ku heli karto Gareth Bale – Gool FM
Kooxda Real Madrid oo Manchester United ku wargelisay qiimaha ay ku heli karto Gareth Bale
Haaruun September 13, 2020
(Madrid) 13 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa naadiga Manchester United ee dalka England ku wargelisay qiimaha ay ku heli karto xiddiga ay doonayaan saxiixiisa ee Gareth Bale.
Waxaa saaka soo baxay warar sheegaya in kooxda ka arrimisa garoonka Old Trafford ay doonayso saxiixa Gareth Bale kaddib markii ay ku wareertay heshiiskiis ay ku doonaysay Jadon Sancho.
Haddaba sida ay warinayso Jariiradda Mundo Deportivo haddii ay Manchester United doonayso saxiixa Gareth Bale oo ay rabaan inay kala soo wareegaan Kooxda Real Madrid waa inay kaliya bixiyaan lacag lagu qiyaasay 20 milyan oo euro o u dhiganta 18.5 milyan oo gini ama 23.5 milyan oo dollar.
Red Devils ayaa lagu soo warramayaa inay qarka u saaran tahay inay ka quusato saxiixa Jadon Sancho oo ka tirsan Dortmund, waxaana taa bedelkeeda ay u weecanayaan doonistooda ciyaaryahanka reer Wales ee Gareth Bale.
Kooxda Barcelona oo bartilmaameedkeeda ugu sarreeya ka dhigatay Mohamed Salah... (Miyuu xiddiga reer Masar doonayaa inuu u dhaqaaqo Camp Nou?)
Horudhac: Brighton & Hove Albion vs Chelsea… (Blues oo caawa saxiixyadeeda cusub tijaabasanaysa iyo safafka ay ku soo geli karaan)